Ungamfumana njani umntu kwi-Instagram: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
I-Instagram iyeyona nethiwekhi yoluntu ithandwayo ngalo mzuzu. Kule minyaka idlulileyo ikhule kakhulu, ekhokelele kwizigidi zabantu ukuba babe neakhawunti kuyo. Unokuba neakhawunti kuyo, kwaye ukuba ngaxa lithile uzimisele ukujonga umntu omaziyo okanye uphawu oluneprofayile.
Xa ufuna umntu kwi-Instagram Kuya kufuneka sithathele ingqalelo imiba eliqela. Kuba ayisebenzi ngendlela efanayo nezinye iinethiwekhi zentlalo. Ke ngoko, kulungile ukwazi ukuba yintoni ekufuneka siyenzile okanye into ekufuneka siyithathele ingqalelo kulo mba kwinethiwekhi yoluntu edumileyo.
1 Khangela kwi-Instagram
2 Indlela yokukhangela abantu
3 UGoogle iprofayile ye-Instagram
4 Igama kuFacebook
Ngokungafaniyo nezinye iinethiwekhi zentlalo, kwi-Instagram kuyinto eqhelekileyo umntu uvula iprofayile ngaphandle kokusebenzisa igama labo lokwenyani. Endaweni yokuba kusetyenziswe i-alias, ngakumbi kwigama ekuthiwa ligama lomsebenzisi. Kuba zimbini iinkcukacha ekufuneka sizazi malunga nesicelo, zombini ekudalweni kweprofayili njengaxa ukhangela umntu.
Kwi-Instagram sinokukhangela umntu othile usebenzisa igama lomsebenzisi, eligama leprofayile, ukuyibonisa ngandlela thile. Ukuba ufaka isikhangeli kuthungelwano lwentlalo, ligama elivela kwi-URL. Kodwa igama lomsebenzisi alisoloko lihambelana negama lokwenyani lomntu. Ke xa sikhangela, sisenokungasoloko sifumana iziphumo ezilindelekileyo kwisicelo. Ukuba siyalazi igama lomsebenzisi, ukukhangela akuyi kuba nzima kwaye akuyi kuthatha nantoni na. Kodwa ukuba sazi kuphela igama lakhe lokwenyani kwaye akalisebenzisi elo gama kwinethiwekhi yoluntu, kunzima ngakumbi.
Igama lomsebenzisi lihlala lisinika iziphumo, eyakuba yeyeprofayile ethile kwi-Instagram, ke siyazi ukuba ngulo mntu okanye hayi. Igama lokwenyani linzima ngakumbi, kuba banokubaninzi abantu abanelo gama, ngaphandle kokuba linegama lokuqala okanye lokugqibela, elicacisa gca ukukhangela.
Indlela yokukhangela abantu
Le yinto esinokuyenza kuzo zonke iinguqulelo ze-Instagram, nokuba sisebenzisa ikhompyuter okanye uguqulelo lwe-smartphone. Xa sifaka iakhawunti yethu, siyabona ukuba phezulu sifumana ibhokisi yokukhangela, kunye ne icon yeglasi yokukhulisa. Kulapho siza kufaka igama esifuna ukukhangela kwinethiwekhi yoluntu. Ke sicofa kuyo kwaye siqale ukubhala.
Singabeka igama okanye igama lomsebenzisi, Kuxhomekeke kwidatha esinayo malunga nalo mntu kwi-Instagram. Njengoko sibhala, siyabona ukuba uluhlu luvela ngezantsi, oluhlala lusiba lincinci xa sifaka oonobumba abaninzi begama. Ecaleni kweprofayili nganye sifumana ifoto encinci. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba simqonde lo mntu kwesi sithombe, kangangokuba sele simfumene. Nangona iprofayile ingenayo ifoto, sisenokungazi ukuba ngoyena mntu simfunayo.
Inethiwekhi yokuncokola iyasivumela ukuba singene kule profayile ngalo lonke ixesha. Ingxaki kukuba xa sityelele iprofayile, kuba sifuna ukwazi ukuba ngulo mntu na okanye hayi, kodwa ke bekungekho, xa sibuya, Kuya kufuneka siqale ukukhangela kwakhona. Le yeyona nto iphosakeleyo kakhulu kwinethiwekhi yoluntu malunga noku. Ke ukuba loo mntu akanamfanekiso weprofayile kunye negama eliqhelekileyo, kungathatha ixesha ukuba sigqibe ukukhangela le profayile.
UGoogle iprofayile ye-Instagram
Ukuba iakhawunti ye-Instagram yomntu owaziwayo okanye inkampani okanye uphawu, Sinokubuyela kuGoogle. Kwanele ukufaka igama lophawu kwisikhangeli kwaye emva koko wongeze i-Instagram ekugqibeleni, ukuze sifumane i-URL esisa kwiprofayile kwinethiwekhi yoluntu. Ukusuka apho, sinokungena kwiakhawunti kwisikhangeli kwaye silandele le akhawunti ngqo.
Ukukhangela kuGoogle kunokuvavanywa nomntu omnye, nangona le nkqubo ingaqhelekanga kakhulu kwezi meko. Kodwa ukuba ujonga iakhawunti kunye nabalandeli abaninzi, ezinje ngeeprofayile zabantu abadumileyo okanye abaphembeleli, okanye iimveliso, inokusebenza kakuhle kwaye ilula ngokwenyani. Ngokukodwa ukuba sihlala sisebenzisa ingxelo kwi-Instagram browser. Kuba singalandela ezi akhawunti ngokuthe ngqo kwikhompyuter.
Yinkcukacha esinokuthi siyithathele ingqalelo, kuba abasebenzisi abaninzi baneakhawunti zabo ze-Facebook ezinxulunyaniswe nezo ze-Instagram. Ke ngoko, singabakhangela sisebenzisa amagama abo kuFacebook, okanye igama lomsebenzisi abanalo kuFacebook. Eyona nto iqhelekileyo kukuba iya kufana kuwo omabini la matyala, ukuze simfumane lo mntu kwimizuzwana embalwa kwaye ke sikwazi ukufumana umntu esimfunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Ungamfumana njani umntu kwi-Instagram
Amandla eSistem Ibhokisi yangaphandle yesitrato uhlalutyo